Home Wararka Ciidankii Baydhabo la geeyay oo qaar ka mid ah ay hubkoodii iibsaday
Ciidankii Baydhabo la geeyay oo qaar ka mid ah ay hubkoodii iibsaday
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor Ciidamo Police ah oo tiro ahaan gaaraya 200 askari geysey Magaalada Baydhabo, si u maamulaan amniga goobta ay ka dhaceyso Doorashada Madaxweynaha Maamulka Koofur galbeed.
Warar lagu kalsoon yahay oo caawa ka heleney Magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ilaa 13 askari in hubkoodii ay iibsadeen, afar kala si xoog ah looga qaatey sida uu noo xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan police ka qeybta Gobalka bay.
Bulashada reer koonfur galbeed ayaa walaac iyo wel wel balaaran ka muujisey ciidanka lagu soo daabuley Baydhabo, waxayna ku tilmaameen ciidankan fidno Xamar laga keeney.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmajo ayaa waxaa uu wax walba ka hormarinaya rabitaankiisa gaar ka ah ee uu ku doonaayo in uu helo madaxweyne isaga uu sameysetey oo maqaarsaar ah, isagoon ka eegeynin Dhibaatada ka imaam karta.
Previous articleShaqaalle Gaaraya 300 oo laga eryay garoonka Aadan Cadde iyo Xalane+Xiisad ka taagan!!
Next articleTaliyaha Ciidanka Xoogga Dalka oo farin adag u diray Ururka Al Shabaab
Maamul cusub oo loo sameeyay Degmada Af-madoow ee gobolka J/hoose
Farmajo: Deriska waa inaan degdeg ugu tacsiyadeeyo, Somalida maya Sabab?